आफूवि'रुद्ध ज्यान छाडेरै लागिपरेको माधव पक्षलाई ओलीले किन दिए आममाफी ? - Rising Dainik
July 22, 2021 July 22, 2021 Ramash KunwarLeaveaComment on आफूवि’रुद्ध ज्यान छाडेरै लागिपरेको माधव पक्षलाई ओलीले किन दिए आममाफी ?
काठमाडौँ / एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन भूमिका खेल्ने माधव पक्षका नेताहरुलाई माफी दिने घोषणा गरेका छन् । पुष्पलाल श्रेष्ठको स्मृति दिवसमा बोल्दै बिहीबार उनले एकताका लागि सवैलाई माफ गरेको बताएका हुन् । ।
उनले भने, ‘पुष्पलालबाट प्ररेणा लिऔं । महान विचार कार्यान्वयन गर्न एक जुट होऔं, पद र स्वार्थका कुरा छाडौं । देशका कुरा गरौं । एकताका कुरा गरौं। बाटो बिराएका र भड्किएकालाई आममाफी भयो । आउनुहोस् मिलेर काम गरौं ।’पार्टीले सानोतिनो धक्का होइन, ठूलो क्ष’ति बेहोरेको भएपनि एमालेमा फर्किनेलाई माफ गर्ने उनको भनाइ छ। मिलेर काम गरेर पार्टीलाई मजबुत बनाउनुपर्ने बताउँदै अध्यक्ष ओलीले एकजुट हुन आह्वान गरे ।
ओलीले भने, ‘आउनोस् मिलेर काम गरौं । यस आन्दोलन मजबुत पारौं । एकजुट भएर जाउँ । यद्यपि यस आन्दोलनले सानो धक्का बेहोरेको छैन, ठूलो क्षति बेहोरेको छ । त्यो पनि आफ्नै कारण ।’यता, राजनीतिक वृत्तमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने चर्चा व्याप्त छ । नेपाल समूहले राष्ट्रपति भण्डारीमाथि महाभियोग लगाउन अग्रसरता जनाउने भएकाले ओलीले यस्तो कदम चालेको हुनसक्ने बताइन्छ ।
माधव नेपाल लगायतलाई आममाफीको घोषणा: ओलीको अर्को चलाखी, भित्री दाउ अर्कै !
बजेटमा समेटिएका ७ लोकप्रिय कार्यक्रम यस्ता छन्
रिसाए ओली : माधव नेपाल पक्षका सबै नेताको पद खोसी, ओलीले एक नेता मार्फत पठाए माधव नेपाललाइ यस्तो संदेश
March 12, 2021 Ramash Kunwar
माओवादी केन्द्रले एकाएक किन गर्यो यस्तो निर्णय, अब के गर्छन ओली ?